I-Redmi engaqondakaliyo ene-Snapdragon 730 iye yavuza | I-Androidsis
Ukucaciswa okuninzi kweRedmi ene-Snapdragon 730 kunye nekhamera kathathu iyavela
URedmi usandula ukwazisa ii-smartphones Redmi Qaphela 7, Inqaku le-7 Pro y Redmi 7 e China. Nangona kunjalo, abalandeli bebhrend balinde ngolangazelelo ukufika kwezinto ezicingelwayo I-Redmi ene-Snapdragon 855 kwaye enye inekhamera yeselfie ezivelelayo, enokuthi ibe yile sithetha ngayo kwesi sihlandlo.
Umfanekiso ovuzayo kunye nezinye izinto eziphambili ze iRedmi entsha nezayo ziye zavela kwiiyure nje ezimbalwa ezidlulileyo. Yintoni ebonisiweyo kukubandakanywa kweyona chipsets zintsha zeQualcomm kunye nezinye izinto kunokusixelela ukuba sijamelene nesiphelo esiphakamileyo premium. Masiqwalasele ngakumbi ...
El Samsung Galaxy A80, eza neseti yekhamera ejikelezayo kathathu, iyifowuni yokuqala yokusebenza emhlabeni kunye Snapdragon 730, Iqonga elitsha le-8nm leQualcomm. Nangona ayizukuphela kweselfowuni ukuba ithethe i-SoC ixesha elide, njenge-Redmi engaqondakaliyo nayo iya kuba nayo, ngokokuvuza okutsha.
Iimpawu ezivuzayo zeRedmi kunye ne-Snapdragon 730
Ulwazi oluvuzayo lutyhila ukuba isixhobo senkampani yaseTshayina siya kuxhotyiswa ngebhetri yomthamo we-4,000 mAh. Kuba iyakuba ngumnxeba ophakathi kwinqanaba eliphakathi, iya kuba nenkxaso yokutshaja ngokukhawuleza. Emva koko, ukufota, uya kuba neseti yekhamera kathathu ye-48 MP + 8 MP + 13 MP.
Umfanekiso ovuzayo, obonisa ifowuni ebekwe ngaphakathi kwimeko ekhuselayo, iyakuqinisekisa oko iya kuba nekhamera ye-3,5mm ye-audio kunye ne-pop-up ye-selfie yekhamera. Oku kubonisa ukuba iya kuxhotyiswa ngescreen ngaphandle kwenotshi.
Mhlawumbi ifowuni entsha eneRedmi ene-SD730 Iya kuba semthethweni phambi kokuba inkampani isungule iRedmi nge-Snapdragon 855. Kuyacetyiswa ukuba ulinde ukuvuza okungakumbi ukuze wazi ngakumbi ngalo, kuba ezi ziya kuba zezokuqala ukuvela kule fowuni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Ukucaciswa okuninzi kweRedmi ene-Snapdragon 730 kunye nekhamera kathathu iyavela
IiHapps ezikhutshiweyo kwiVenkile yokuDlala azikho ngenxa yokukhumbula kwenkampani